摘 - Wikipedia
fanoratana ny sinograma 摘
摘 dia kanji ampiasain'ny fiteny japoney, ny fiteny koreanina ary ny fiteny sinoa. Voasokajy ao amin'ny tōyō kanji 当用漢字 tōyō kanji, kanji fampiasa) ity kanji ity.
1.1 Laharany amin'ny raki-pahalalàna
1.2 Laharany Informatika
2 Fiteny sinoa sy fiteny kantoney
Laharany amin'ny raki-pahalalàna [hanova]
Ireo ny tsiahin'ity sinôgrama ity anatin'ny raki-pahalalana sinoa, koreana sy japoney :
KangXi : 0449.320
I Kangxi nangataka firaketana ngeza indrindra momban'ny sinögrama. Ny anarany dia rakibolan'i Kangwi ; hatr'izay, efa voaoatra amin'ny lafin'ny hangeza. Nampiditra ny voantsoratra (clefs) 214 mba handamina ny sinögrama izy ary mbola ampiasaina ankehitriny.
Morobashi : 12582
Dae Jaweon : 0800.170
Hanyu Da Zidian : 31949.010
Laharany Informatika [hanova]
Ny laharan'ity kanji ity amin'ny Unicode dia U+6458. Ny fomba fampidirana ity kanji ity amin'ny fomba Cangjie dia 手卜金月 (QYCB).
Tany Sina ny hanzi no nisy voalohany. Ity hanzi ity dia ampiasaina amin'ny fiteny Sinoa sy amin'ny fiteny kantoney. Ny teny voasintona avy amin'ny fiteny kantoney koa dia mampiasa ity kanji ity, na dia samihafa amin'ny fiteny kantoney aza ny fanononana azy. Ny hanja koreana dia fomba fanoratana voasintona avy amin'io fomba fanoratana io, fa kelikely nohon'ny amin'ny fiteny sinoa ny hanzi ampiasaina amin'ny fiteny koreana
Ny fanoratana sinoa nentindrazana dia fanoratana hita hoatry ny satotra be (betsaka tsipika) : ireo kanji ireo no ampiasain'ny sinoa any amin'ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) sy ny sinao any Singapaoro.
Ny mpiteny sinoa ao amin'ny repoblika entim-bahoakan'i Sina indray dia mampiasa ny fanoratana sinoa notsorina, ny soratra sinoa notsorina koa tsindraindray dia mety hita amin'ny fiteny Japoney, ny sinôgrama nentindrazana amin'ny fiteny japoney dia tenenina hoe kyujitai.
Ny fanononana pinyin an'ity sinôgrama ity dia zhāi (zhai1) Tsindraindray afohezina ho Wade, ny Wade-Giles dia romanizasiôna ny fiteny mandarina. Io romanizasiôna io dia nampiasain'i Thomas Wade teo anivon'ny taonjato faha 19 ary novain'i Herbert Giles tao amin'ny rakibolany sinoa-anglisy tamin'ny 1912 ; io romanizasiôna io no nampiasain'i Taiwan sy ny tontolo miteny anglisy mandritry ny taonjato faha 20.
Ny olana amin'ny sistema Wade-Giles dia izy tsy manoro ny renifeo voatsoka, zavatra atoro amin'ny alàlan'ny apôstrôfo : p, p', t, t', k, k'. Ny eoropeanina sy ny amerikanina tsy dia zatra an'io sistema io dia manadino na tsy miraharaha ny apôstrôfo ; kanefa renifeo roa samihafa ny renifeo misy tso-drivotra (aspiré) sy ny tsy misy. Ny pinyin dia manoro ny renifeo misy tso-drivotra amin'ny alàlan'ny renifeo b, d sy g (soratra tsy miasa amin'ny Wade-Giles) ho an'ny renifeo p, t sy k misy tso-drivotra.
Ny fanononana Wade-Giles an'ity hanzi ity dia chai1
Ny fiteny kantoney amin'ny ankapobeny dia fiteny tenenina fa tsy fiteny soratana. Ny fiteny kantoney tenenina dia samihafa amin'ny fiteny sinoa soratana ankehitriny, endrika soratana an'ny fiteny mandarina tsotra. Ny feon'ny fiteny sinoa tenenina dia samihafa be sady lavitra be amin'ny fiteny kantoney. Amin'ny fotoana mandeha, nilaina no nahazo teny tenenina mirindra amin'ny fiteny soratana. Noho izany, dia mampiasa sinograma manokana ho an'ny fiteny kantoney. Maro amin'ny sinograma kantoney no tsy manana sanda mitovy lenta amin'ny fiteny mandarina. Tsy azon'ny tsy mpiteny kantoney ny fiteny kantoney, satria mampiasa fitsipi-pitenenana sy volana tsy azon'ny olona tsy miteny mandarina.
Ny rômanizasiona Yale indray dia ny sistema efatra noforonina nandritry ny Ady lehibe faharoa ho an'ny olona militera amerikanina. Norômanizeny ny fiteny efatra tenenina ao Azia Atsinanana : ny fiteny mandarina, ny kantoney ary ny fiteny koreana sy ny fiteny jeponey. Na dia izany, ny romanizasiona efatra dia tsy misy fifandraisana ary ny litera any anatin'ny romanizasiona teny iray dia mety tsy mitovy fanononana amin'ny romanizasiona ny teny hafa.
Izy dia ampiasaina any Etazonia mba hampianatra ireo teny aziatika ireo ho an'ny mpianatra, fa ankehitriny izy maizina ary tsy ampiasain'ny akademiam-piteny. Mampianatra fiteny mandarina, ohatra, dia mampiasa ny Hanyu Pinyin. Ny McCune-Reischauer, nialohan'i Yale, dia nanjaka tao amin'ny rômanizasiôna koreanina hatry ny taona maro ary mihavoasolon'ny rômanizasiôna naverina, noho izy tsy mampiasa diakritika.
Ny fanononana Yale ho an'ity sinôgrama ity dia jaak6
Ny isan'ny fomba fandikana ny teny koreana amin'ny teny latina dia misy telo : ny fandikana tena ampisaina ankehitriny dia ilay Rômanizasiôna naverina ny teny koreana na romanisation revisée du coréen amin'ny teny frantsay na 국어의 로마자 표기법 amin'ny teny koreana. Io fomba io dia noforonina tany Korea Atsimo mba hanolo ny romanizasiona niasa taloha, miankina amin'ny fomba McCune-Reischauer.
Ny anaram-pianakaviana amin'ny teny koreana dia tsy voatery avadika amin'ny teny latina amin'io fomba io, fa ampahazoton'ny governemanta ny fianankaviana koreana hampiasa io romanizasiona io.
Hangul : 적
Eumhun : 딸 적, 돋구어낼 적, 움직일 적
Ny famakiana eumhun napetraka teto dia afaka jerena any amin'ny tetikasa libhangul.
on’yomi : てき (teki), たく (taku), ちゃく (chaku)
kun’yomi : つむ (tsumu), ひろう (hirou), あばく (abaku)
Ny famakiana kun na kun'yomi (famakiana semantika) dia famakiana ny kanji avy amin'ny teny japoney. Ary izy io dia ampiasain amiaraka amin'ny famakiana on na on'yomi.
Tamin'ny soratra sinoa nampidirina tao Japana, sarotra ihany ny fizarana ; satria ny teny japoney dia mampiasa tovana sy tovona, zavatra tsy ampiasaina amin'ny teny sinoa. Torak'izany koa ny olana tamin'ny teny koreanina. Ny vahaolana tamin'io dia mamorona soratra vaovao mba ahafahana manoratra ny feo avoakan'ny tovona sy ny tovana, ary teo no nipoiran'ny kana.
Matetika famakiana kun no ampiasaina rehefa arahan'ny kana ny kanji.
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=摘&oldid=155932"	Sokajy : Pejy misy rohin-drakitra tapakaKanjiHanzi sinoaHanja koreana	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 9 Jiona 2011 amin'ny 21:02 ity pejy ity